संकटकाल लगाएर भएपनि ओली चुनावमा जान्छन् : डा. दिक्षित - Arthasansar
शनिबार, २४ माघ २०७७, १४ : १९ मा प्रकाशित
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले तोकिएकै मितिमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने भन्दै बरु आगामी मंसिरमा निर्वाचन हुनसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । आज (शनिरबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै डा. केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएकोले यस विषयमा बाहिर टिकाटिप्पणी गर्न नहुने धारणा राखे । तर, दलका नेताहरुले भने बाहिर जथाभावी टिप्पणी गरेको उनको गुनासो छ ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले मंसिरमा निर्वाचन गराउनको लागि चुनावी सरकारको नेतृत्व नागरिक समाजका अगुवाई डा. सुन्दरमणि दिक्षितलाई दिनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘मेरो नेता उहाँ हो । हामी निश्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छौं । तर, मुलुकलाई निकास चाहियो नि । अहिलेको समयमा डा. दिक्षित उपयुक्त पात्र हो । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईँदैन् । अदालतको निर्णय चाँडो हुनुपर्छ । सबैले यो निर्णय मान्नुपर्छ ।’
उनले जसको कारण संसद विघटन भएको हो आज उनीहरुले नै अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिईरहेको भन्दै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहप्रति आक्रोश पोखे । उनले भने,‘दलका नेताहरु आज निर्वाचन आयोग पुगेर चुनाव चिन्ह हामीलाई दिईनस भने ठिक हुँदैन् भनेर धम्की दिईरहेका छन्। यो गलत हो ।’ उनले मुलुक नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमार्फत चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको पनि गुनासो पोखे ।
उनले अहिलेको विवाद उत्पन्न हुनुमा सबैभन्दा बढि दोष संविधानको भएको भन्दै संविधान संशोधन गरेर दुई जना प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो भन्दै नेकपामा दुई अध्यक्ष भएकोमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे । उनले भने,‘संविधान सबभन्दा ठूलो त्रुटी हो । यिनीहरुले संविधान संशोधन गरेर दुई जना प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो । एकजनाले आन्तरिक गृह चलाउने र अर्कोले विदेश हेर्ने गर्नुपर्दथ्यो । यिनीहरुले पार्टीमा त दुई जना अध्यक्ष बनाए । तर, दुई जना प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको भए अहिले लडाईँ नै हुँदैनथियो ।’
उनले सत्तारूढ नेकपाको विवादको चुरो नै पदीय भागबण्डा भएको पनि तर्क गरे । उनले नेकपाले अहिले आएर लोकतन्त्रमाथि नाँगो नाँच देखाएको पनि टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वभावबारे कुरा गर्दै प्रतिशोध साँध्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रण गरे । उनले भने,‘ओलीमा प्रतिशोधी भावना छ । उनी शक्तिको लागि जुनसुकै हदसम्म पनि जान सक्छन् ।’ उनले निर्वाचन त हुने तर त्यो निर्वाचन वैशाख १७ र वैशाख २७ गते भने नहुने दाबी गरे । उनले भने–‘निर्वाचन हुने÷नहुने हाम्रो हातमा पनि छ । निर्वाचन भए अब मंसिरमा हुन्छ । तर, वैशाखमा कुनै पनि हालतमा हुँदैन् ।’
उनले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री ओली देखिएपनि भित्री कारण प्रचण्ड नै भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘उनीहरुबीच अढाई÷अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । तर, उनीहरुले त्यो सहमति गोप्य राखे । केपी ओलीले दोस्रो पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गरेपछि र दश वर्ष अझै बाँच्ने भएकोले यो बबण्डर भएको हो । समस्याको जड हो ।’ उनले देशमा आफूमात्रै पद नपाई लुखुर लुखुर हिँड्ने मान्छे भएको सुनाए ।
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले देश अहिले ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने,–‘अहिले हामी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं । देशको अवस्था यस्तो छ कि निकट भविष्यमा के हुन्छ ? भन्नेपनि थाहा छैन् । यो अन्यौलग्रस्त र डरलाग्दो स्थिति हो । हामी जनताले धोकामात्रै पायौं । नेकपाका नेताहरुले ठूलो पाप गरे । केही काम गरेनन् ।’
डा. दिक्षितले आफूहरु जनताले नेकपा नेताहरुको पदीय भागबण्डा र लोभका कारण धोका पाएको भएपनि प्रचण्डको ग्रुपले चाहीँ ओली नमरिदिएकोले धोका पाएको भन्दै कडा टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेकपाले सरकार गठन गरेको दिनदेखि, त्यो भन्दा अलिक अगाडि दिनदेखि नै यीनीहरुबीच यत्रो झैझगडा भएको रहेछ, मुलुकको त वास्ता रहेनछ उनीहरुलाई, उनीहरु त कसले प्रधानमन्त्री पड्काउने ? कहिले पड्काउने ? अढाई वर्ष पड्काउने कि अहिले पड्काउने ? अथवा गिद्धजस्तो भएर कुन बेला ओली मर्ला भनेर बसेका रहेछन् । अब अनफर्चुनेट्ली, ओली मरिदिएनन्, ओलीजी त मरिदिनुभएन, उहाँ त झन अहिले तन्दुरुस्त, हिजो देखिहाल्नुभयो उहाँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, त्यसैले यीनले धोका खाए, हामीले त धोका खायौं, खायौं, तर विचरा प्रचण्ड ग्रुपले पनि धोका खाएकै हुन्, किनभने हामीले धोका खायौं, यीनको बेईमानीबाट, प्रचण्डले धोका खाए ओली नमरिदिएकोले ।’
अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले राज्यका सर्वोच्च निकाय÷संस्थाहरु एक–आपसमा झगडा र द्वन्द्वमा हुन दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यही अवस्थाले भोलि मुलुक संविधानले अन्दाज नगरेको ठाउँमा पनि पुग्नसक्ने खतरा औंल्याए ।
डा. शर्माले अहिले संविधानको सरंक्षक प्रधानन्यायाधीश आँफै झगडीया हुनुपनि दुःखद् भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘उहाँले आफूलाई झगडीया हुनबाट बचाउन सक्नुपर्दथ्यो । सभामुख पनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु गल्ती हो । तर, यो विषयमा उहाँ आँफै अदालत जानु चाहीँ स्वागतयोग्य कुरा हो ।’ उनले राज्यका सर्वोच्च अंगहरुबीचको द्वन्द्व र झगडाले मुलुकलाई बेफाईदा भएको भन्दै यसले संविधानलाई नै भंग गर्न सक्ने, संविधान अनमेकिङ र ब्रेकडाउन सुरु भएको भन्दै उक्त कुरा चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरे ।
अहिले सभामुख–प्रधानमन्त्री आरोप प्रत्यारोप, प्रधानमन्त्री–सभामुख आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुजस्तो विचित्रको दृश्य देखिएको पनि सुनाए । उनले अहिले मुलुकले यो संविधान जोगाउन सक्छ कि सक्दैन् ? भन्ने नै प्रमुख सवाल भएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले संसद पूनःस्थापना गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले अहिलेको मुलुकको अनिश्चित्तालाई र विवादलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन र संविधान बचाउने काम गर्नेछ ।’ उनले संसद पूनःस्थापना नभए संविधान अनमेकिङ प्रोसेस सुरु हुने पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।
म माथी शारिरिक हमला पनि हुन सक्छः प्रधानमन्त्री ओलि
केपी ओली वर्तमान युगको कालिदास सावितः राजेन्द्र श्रेष्ठ
सांसदहरु मालामाल: संसद नचलेको अवधिको पनि तलब पाउने